Nri usoro nri: uwe ejiji 16 ngwa ngwa - Ntụziaka | Ntụziaka
Susana godoy | | Atụmatụ nri
Ike gwụrụ gị ịdị na-eji salad gị eme ihe mgbe niile n'otu ụzọ? Na mbata nke oge okpomọkụ, salads Efere ndị ahụ ghọrọ eze nke kichin, taa anyị nwere aghụghọ pụrụ iche iji mee salads ka ọ na-atọkwu ụtọ site na akwa akwa 16 nke enweghị ike ịla n'iyi na salads gị. Ha dị mfe na ngwa ngwa:
2 Uwe ejiji French
3 Yogọt Sauce
6 Pink ihendori
7 Tomato vinaigrette
8 Garlic na rosemary mgbakwasa
9 Uwe ejiji Mexico
10 Herb na lemon mgbakwasa
11 Ahụekere butter na walnuts
12 Uwe oliv
13 Greek yogọt ihendori na pickles
14 Uwe eji ejiji Cesar
15 Uwe oroma
16 Ndụmọdụ Ndị Bara Uru iji chebara ejiji gị echiche
Ọ bụ otu n'ime ndị ochie. Iji mee ya ngwa ngwa, tinye nnu na ose na efere, tinye mmanya na-agwakọta nke ọma. Ozugbo nnu ahụ gbazee n'ime mmanya, gbakwunye mmanụ (okpukpu atọ nke mmanya), ma gwakọta ya ruo mgbe ọ ga-emulsifies (nke mere na ọ ga-efunahụ nghọta ya ma mee ka ọ dị ntakịrị). N'ụzọ dị otú a, ị ga-enyekwu ekpomeekpo na vinaigrette nkịtị.
Uwe ejiji French
O zuru oke maka ojiji na akwukwo ahihia akwukwo. Iji kwadebe ya, tinye ngaji mmanụ a andụ na ngaji mọstad na vinaigret nke gara aga nke anyị kwadebere. Emulsify ihe niile nke ọma ruo mgbe etinyechara ihe abụọ a. Na-atọ ụtọ!
O zuru oke maka salads na kukumba, poteto ma obu akwukwo ndu. Ọ bụ otu n'ime igodo salads na nri ọwụwa anyanwụ na nri Arab maka na ha dị ụtọ. Gwakọta yogọt sitere na mmanụ, mmanya na akwụkwọ Mint ole na ole. Nhọrọ ọzọ bụ iji ọkara nke yogọt na ọkara nke ọzọ nke cheese ọhụrụ.
Ọ dị mma maka nri ọ bụla na salads nwere carrots na kabeeji, ha zuru oke. Iji kwadebe ya, ọ kachasị mma ịme Mayonezi a na-eme n'ụlọ na blender, tinye akwa, 200 ml nke mmanụ oliv, tablespoons abụọ nke mmanya ma ọ bụ ihe ọ lemonụ lemonụ lemon, nnu na obere mọstad. Kpoo ihe niile rue mgbe ị nwetara ngwakọta homogeneous na ị ga-ahụ ka ọ si atọ ụtọ.
Wayo zuru oke ma na-enye ume ọhụrụ na salads. Ọ na-enye ha mmetụ nke acidity dị mkpa iji mee ka ọ dị ọhụrụ. Iji kwadebe ya, tinye ihe ọ ofụ juiceụ nke wayo, ngaji mmanụ oliv atọ, tablespoons abụọ nke mmanya balsamic na obere nnu n'ime akpa. Emulsify ihe niile ma tinye ya na salad kachasị amasị gị.
Site na Mayonezi a na-eme n'ụlọ nke anyị kwadebere na ejiji nke gara aga, anyị ga-akwadebe ihendori pink iji soro salads anyị. Maka nke a, ị ga-achọ tebụl abụọ nke Mayonezi a na-eme n'ụlọ, ngaji nke Keepchup, nkwụsị nke whiskey na mmiri oroma. Gwakọta ihe niile dị na voila!
Ọ bụ ihe mgbakwasa nke zuru oke na salads na cheese mozzarella. Iji kwụsị ya, gwakọta nri 3 nke mmanụ oliv, otu balsamic balsamic mmanya, nnu na ngaji abụọ nke tomato jam. Emulsify ihe niile na ọ ga-zuru okè.
Garlic na rosemary mgbakwasa
N’ime obere karama, kwadebe mmanụ oliv na-amaghị nwoke, 1 nnukwu galik na galik nke rosemary ọhụrụ. Debe galiki nke galiki na akpụkpọ n'ime ite ahụ, hichaa rosemary nke ọma ma kpoo ya. Ozugbo akọrọ anyị na-etinye ya na karama ma jupụta ihe niile na mmanụ oliv na-amaghị nwoke. Hapụ ya n’ebe gbara ọchịchịrị ma ọ dịkarịa ala otu ọnwa, nke mere na ọ na-ewe ísì ọma niile. O zuru oke maka salads.
Uwe ejiji Mexico
Ọ bụrụ n’ịchọrọ inye salad gị ihe na-ekpo ekpo, nke a bụ ihe mgbakwasa gị. Kwadebe n'ime ite 4 nke kepchut, obere cayenne, ngaji tomato ihendori, ngaji atọ nke ihe ọ lemonụ lemonụ lemon na mkpo nnu. Emulsify ihe niile na ị ga-enwe a zuru okè mgbakwasa.
Herb na lemon mgbakwasa
Uwe na ahịhịa Lemọn: Gwakọta tablespoons 4 nke mmanụ oliv, 1/3 iko nke parsley chopped, tablespoons abụọ nke ihe ọ lemonụ lemonụ lemon, tablespoons atọ nke Mint ọhụrụ, 1/2 tablespoon nke oregano a mịrị amị, a clove of garlic, nnu na Ose. Ghichaa galiki nke ọma ma gwakọta ya na ihe ndị ọzọ.
Ahụekere butter na walnuts
O nwere ike ịbụ uwe mgbatị na-agbanwe agbanwe, mana ọ ga-agbakwunye mmetụ pụrụ iche na salad gị. A na-egosi mgbe anyị mere salad dị mfe ma dịkwa mma. Ọ bụrụ naanị na ị nwere obere letus, mgbe ahụ, nke a bụ uwe kachasị mma gị.
Maka nke a ị chọrọ tablespoon nke ahụekere bọta, nke ị ga-agbakwunye walnuts ise, peeji mmiri abụọ na obere mmiri lemon. Anyị ga-agwakọta ihe niile nke ọma na nnukwu efere ma anyị ga-enwe mgbakwunye zuru oke maka ihe ga-abụ ezigbo salad.
Ee, oliv nwekwara ike ịbanye n'ime salad. Mana na nke a, anyị ga-eme akwa ọgaranya na ha. Ọ bụ ihe metụtara igbutu ọkara mkpụrụ oliv iri na ọdụdụ oliv nke jupụtara na mkpụrụ oliv ojii. Anyị na-etinye ọkara otu teaspoon nke oregano na ọkara kloovu nke galik. Ha niile dị ọcha ma dị njikere ije ozi.
Greek yogọt ihendori na pickles
N'okwu a, o zuru oke iji kpokọta yogọt Greek na pịkụl abụọ ma ọ bụ atọ, obere basil ma ọ bụ mint na, n'ezie, nnu na ose iji nụrụ ụtọ. Ngwa ma dị mfe mana na aka ahụ dịkwa ụtọ.
Uwe eji ejiji Cesar
Ọ bụ ezie na o nwere ọtụtụ ihe, a na-akwadebe ya ihe na-erughị otu nkeji. Will ga-agbakwunye ihe ndị a na iko mmiri: Otu àkwá, anchovies anọ gbara agba, mmanụ sunflower 50 ml maka ekpomeekpo dị ụtọ ma ọ bụ mmanụ oliv maka nsonazụ siri ike karị. Otu ngaji nke Perrins ma ọ bụ Worcester ihendori, ọkara apụl cider mmanya, ngaji ọzọ nke mọstad, otu ihe ọ lemonụ lemonụ lemon, ọkara kporo nke galik, gram 50 nke chiiz Parmesan na obere ose. O doro anya na ị na-anụ ụtọ nsonaazụ ikpeazụ!
Maka salads na mkpo, anyị nwere uwe oroma. Ọgaranya na mfe. Iji mee nke a, ị chọrọ ọkara oroma na ọkara lemon. Ga-etinye ngaji mọstad abụọ, obere ose, nnu na ịpị mmanụ oliv. Wụchaa ihe niile ma jeere ya ozi na ọkacha mmasị gị.
Ndụmọdụ Ndị Bara Uru iji chebara ejiji gị echiche
Otu n'ime ihe ndị kachasị mkpa na ejiji bụ mmanụ. Buru n'uche na ọ bụrụ na salad nwere ụfọdụ abụba dị ka ube oyibo, anyị nwere ike tinye obere ukwu. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbakwunye acid acid, nke nwekwara ụdị ihendori, ọ dịghị ihe dịka obere mmanya balsamic. Ọ bụrụ na ịnweghị ya n'ụlọ, ịnwere ike dochie ya maka ihe ọ juiceụ juiceụ nke mkpụrụ osisi citrus ị maara.
N'ezie, ọtụtụ ndị na-ahọrọ ịgbakwunye ihe kachasị mma. O nwekwara ike ịbụ, n'ihi na dị ka anyị na-ahụ, na dressings nwere ike ịbụ ihe ndị kasị iche iche. N'okwu a, ị ga-enweta ya na obere mmanụ a honeyụ na nke kachasị dị ize ndụ, obere jam.
Nwere ike ịchekwa uwe gị n'ime ite mechiri emechi na ngwa nju oyi. N'ezie, cheta mgbe niile iwepu ya nkeji ole na ole tupu iwesa. N'ụzọ dị otú a, anyị ga-ezere na mmanụ dị oke oke n'ihi ụyọkọ oyi.
Kedu ihe mgbakwasa kachasị amasị gị? Mee usoro a na akwa mmanụ a honeyụ, ụmụ gị ga-amịkwa mkpịsị aka ha;):
Akwụkwọ nri, salmọn na macadamia salad na mmanụ a honeyụ
Pathzọ zuru ezu na edemede: Recetin » Atụmatụ nri » Nri isi nri: Uwe Salad 16 ngwa ngwa
M hụrụ ya n'anya, ekele maka Ama :)
Daalụ nke ukwuu Karen! :)
Zaghachi Ángela Villarejo
Mary Ìhè dijo
Ezigbo nhọrọ !!! ekele
Zaghachi Luz mary
Ndewo, m ga-achọ ịma otu esi edobe akwa akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na ngwa nju oyi
You nwere ike idebe ha n'ime ite iko. Ka ga-eri ha n’ime ụbọchị abụọ ma ọ bụ atọ. Mmakụ!
Obi ụtọ Diosnarda dijo
Usoro nri ndị a niile na-atọ ụtọ, ha bụ usoro ntụziaka dị mfe ma dịkwa mkpa iji mara ha.
Zaghachi Diosnarda Feliz
lisa orengo dijo
Dtb ekele gbalịa usoro nri dị mma = p
Zaghachi ka lisa orengo
OLGA E. dijo
Ha bụ oge a na-etinyetụ ụtọ site n’itinyetụ ha ume ọhụrụ. Daalụ nke ukwuu.
Zaghachi OLGA E.
Gluten na-enweghị nri anụ
Ube oyibo, Tomato na Mozzarella Salad na Lemọn Wayo Vinaigrette